भगवान शिवले किन काटेका थिए आफ्नै पुत्र गणेशको शिर ? – Jagaran Nepal
भगवान शिवले किन काटेका थिए आफ्नै पुत्र गणेशको शिर ?
तर, माता आद्य शक्तिको हातबाट बनेकाले ति बालक जिवित भएर द्वार पालेको काम गर्न लागे । बाहिरबाट कोही आएमा भित्र प्रवेश गर्न न दिने भए । यो थाहा पाएर नन्दिश्वरादी शिवका गणहरू आएर ति बालकसँग लडे तर कसैले पनि लड्न सकेन ।अन्तमा भगवान शिव स्वयम गएर लडे शिवले पनि बडा मुस्किलले आफ्नो त्रिशुले बालकको शिर काटेर अलग गरी भित्र प्रवेस गरे । भित्र गएर माता पार्वती सँग भने ‘आज तिमीले ढोकामा कसलाई राखेकी थियौ त्यसले मलाई भित्र आउन नै दिएन बडो मुस्किलले मारेर आए ।
यसो सुनेर माता पार्ववी त्यो त मेरो पुत्र हो तपाईँले त्यसलाई मारी दिनु भयो भनि रुन लागिन् । यो देखेर भगवान शिवलाई पनि दुस्ख लाग्यो उनले भगवान बिष्णुलाई भने ‘मैले बालकको टाउको फुटाली दिञँ अब त्यो टाउको काम लाग्दैन तपाईँ गएर कुनै पनि प्राणीको टाउको ल्याएर आउँनुहोस् बालकलाई जिवित गर्नु पर्छ ।’यो सुनेर भगवान विष्णु बाहिर गई हात्तिको टाउको लिएर आए । त्यो टाउको काटिएको हात्तीलाई पनि गँगटाको रूपमा अर्को प्राणी बनाइदिए । त्यही हात्तीको टाउको लगाएर बालकलाई जिवित गरियो । पछि उनै बालकको नाम गणेश रहन गएको हो ।